QPC80H2 Gooseneck document visualizer
Kaamirada dukumeentiga ah ee la qaadi karo ayaa ah tan ugu dambeysa ee dabacsanaanta. Iyada oo leh gooseneck la laaban karo, waxay tusi doontaa shay xagal kasta oo xitaa waxay la qabsan doontaa mikroskoob.
Xusuusta gudaha, waxaad kaydin kartaa sawiro iyo muuqaal la qabtay adigoon u baahnayn inaad ku duubto agagaarka kumbuyuutarka.Kaamiradan qeexitaanka sare ah xitaa waxa loo isticmaali karaa labanlaab sidii beddele/scaler!
Fursadaha isku xidhka qani
QPC80H2 gooseneck document camera visualizer ilaa fog waa kamarada dukumeenti fasalka ugu sifaysan.Xidhiidhada VGA iyo HDMI waxay kuu oggolaanayaan inaad duubto muuqaal ama muuqaal.Isku xirka ayaa bixiya dabacsanaanta ugu weyn.Iyada oo leh xulashooyin badan oo isku xirnaan, Qomo waxay si fudud ula midowdaa tignoolajiyada kale ee fasalka.
Badhamada fudud iyo caqliga iyo booska USB ee dhabarka;Dhanka bidix waxaa ku yaal USB-A oo loogu talagalay USB suulka iyo booska USB-B ee isku xirka PC
Gacan Gooseneck waxay ku dhowdahay 445 mm oo leh gooseneck wareeg ah oo bilaash ah oo dhinacyo kala duwan leh
HDMI Multiful ee gudaha/kabada deked dhanka danbe ah
Dhinaca VGA gudaha iyo dabada taageerada lugta dambe ee dhabarka
Madaxa ayaa makarafoonka saaran.Sidaa darteed ma duubi kartid sawirka oo keliya, laakiin sidoo kale codka duubista fiidiyowga
kamarad 5MP ah oo leh 10xoptical zoom iyo 10xdigital zoom.LED-ku-dhismay iftiin dheeri ah oo caqli-gal ah, iftiin jihaysan, si loo abuuro goob muuqaal oo cad
Samaynta waxyaabo yaryar oo ka weyn nolosha
Kamaradan la qaadi karo waxa loo dhisay daawasho.Ka eeg shayada xagal kasta wakhtiga dhabta ah ama marka aad maqan tahay adiga oo duubaya muuqaal qeexid sare ah, oo keen 10x zoom indhaha ee awooda leh heerka ku xiga adiga oo ku dhejinaya mikroskoob.
toogashada cabbirka A3
Aagga ugu badan ee iskaanka ee A3, waxaad sawiri kartaa ku dhawaad ​​wax kasta oo aad uga baahan tahay fasalka.
Waa software sawir/faahfaahin/muqaal duubis ah.Ku habboon Windows 7/10.Mac
Qalab fudud oo kooban.
Sharaxaada dhabta ah
Si fudud loo sameeyo shaashad kala qaybsan isbarbardhigga muuqaal firfircoon oo taagan kaas oo gacan weyn ka geysanaya waxbaridda.Ardaydu waxay yeelan karaan aragti cad oo ku saabsan waxa ay ku kala duwan yihiin bandhigga.
Shaqada annotation-ka ayaa kaa dhigaysa inaad si fudud u sharraxdo wax kasta oo aad rabto inaad ku wadaagto shaashadda. Oo ka dhig fasalka mid is dhexgal ah.
Xiga: QPC80H2 5MP kamarada dukumeentiga indhaha ee fasalka smart
Hore: Kaamirada Webka ee PC-ga Kaamirada Webka USB HD
Dukumeenti sawir qaade
Dukumentiga Sawirka Sawirka
Sawir-qaade Document Kamara
QCamera Buugga Isticmaalaha MAC
QPC80H2 Dukumeentiga kamarada buug-gacmeedka
QPC80H2 xogta farsamada
QPC80H2 Gooseneck buug-yaraha dukumeentiga kamaradaha